Wasiirka kalluumeysiga oo la kulmay howlwadeenada Wasaaradda “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Wasiirka kalluumeysiga oo la kulmay howlwadeenada Wasaaradda “SAWIRRO”
Wasiirka Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, ayaa maanta kulan looga hadlayey dar-dargelinta howlaha qorshe ee Wasaaradda la qaatay Maamulka iyo howlwadeenada Wasaaradda.
Mudane Maxamed Cumar Caymooy Wasiirka Kalluumeysiga ayaa u jeedka kulanka uu la qaatay Agaasimeyaasha Waaxyaha iyo shaqaalaha Wasaaradda uu yahay sidii loo xoojin lahaa howlaha horyaalla Wasaaradda iyo sidii shaqaalaha loogu dhiiri gelin lahaa gudashada waajibaadka loo igmaday.
Wasiirku waxa uu warbixin ka dhageystay Qaar ka mid ah Agaasimeyaasha iyo shaqaalaha Wasaaradda oo ka hadlay caqabadaha jira iyo sida looga gudbi karo, iyagoo Wasiirka ka codsaday in uu arrimahaasi wax ka qabto.
Wasiirka Kalluumeysiga oo ugu dambeyntii hadal ka jeediyay kulanka ayaa maamulka iyo howlwadeenada Wasaaradda ku booriyay inay u istaagaan sidii loo dar dargelin lahaa howlaha loo igmaday, waxaana uu intaa ku daray in kulankan uu dabo socda kulan horey uu ula qaatay Agaasimeyaasha iyo shaqaalaha Wasaaradda.
“Waxyaabaha aan uga hadalnay kulankeena waxaa ugu weyneyd in la xoojiyo wax soo saarka kalluunka, si loo dhiiri geliyo dhalinta ka kalluumeysata xeebaha dalka” ayuu yiri Wasiirka Kalluumeysiga.
Gabdho suxufiyiin ah oo tababar loo furay “SAWIRRO”